भीम रावललाई सान्तवना दिँदै ओलीले यस्तो भनेपछि…. « Ok Janata Newsportal
भीम रावललाई सान्तवना दिँदै ओलीले यस्तो भनेपछि….
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नवनियुक्त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी डा. भीम रावललाई लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति चालेको कदमका लागि धन्यवाद दिएका छन् ।
डा. रावलको पार्टीमा भूमिका रहिरहने भन्दै ओलीले आगामी दिनमा मनमा कुनै तुष नराखी यात्रा तय गर्न सुझाव दिएका छन् । एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन रावलको पनि भूमिका रहने ओलीको भनाइ थियो ।
यता, नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा १९ पदाधिकारी चयन गर्दा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका तीन जना समेटिए ।
६ उपाध्यक्षका लागि सात जना प्रतिस्पर्धामा थिए, जसमा १७६८ मतका साथ छैटौं नम्बरमा रहेर बादल निर्वाचित भए । सात सचिवका लागि ९ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । लेखराज भट्ट १७०४ मतका साथ पाँचौं र टोपबहादुर १७०० मतका साथ छौटौंमा नम्बरमा रहेर विजयी भए ।
ओलीको टिममा नरहेर उपाध्यक्षको चुनाव लडेका घनश्याम भुसाल तथा सचिवको चुनाव लडेका भीम आचार्य र टंक कार्की दुबै पराजित भएका छन् । एमालेमा लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरु दशौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीमा आफूहरुको उपस्थितिलाई सम्मानजनक मात्र नभएर उत्साहपूर्ण भएको बताउँछन् ।
२८ फागुन २०७७ मा ओलीले बादलसहित २३ जनालाई एकपक्षीय रुपमा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरे । त्यो दिन भएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्दै माधवकुमार नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि ग¥यो, तर ओलीले ‘डढेलो लागेको बेला पलाएको पालुवा’ भन्दै उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहे ।
२७ असार २०७८ मा १०बुँदे सहमति हुँदा पनि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई असुरक्षित महसुस हुन दिएनन् । कतिसम्म भने १० बुँदेअनुसार भीम रावलले पाउने पर्ने सूदूरपश्चिम इन्चार्जमा पनि लेखराज भट्टलाई कायमै राखे ।
पहिलो ः यो पुरानो एमाले होइन, नेकपाकै निरन्तरता हो । पूर्वमाओवादी नेताहरुले पनि आफ्नो कदमको प्रतिरक्षामा यही भाश्यलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए ।
दोस्रो ः माओवादी केन्द्रसँग गरेका प्रतिवद्धता वा सहमतिहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ओलीको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ त्यति राम्रो छैन । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमति कार्यान्वयन होस् वा वाम गठबन्धन गर्दा भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयनमा होस्, ओलीमाथि प्रश्न उठेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले त्यसलाई लिएर ओलीले झुटो बोल्छन्, गरेका सहमतिहरु पालना गर्दैनन्’ भन्ने स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
तीन ः देश निर्वाचनको नजिक छ । एमाले नेताहरुका अनुसार निर्वाचनमा एमालेको प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हो । तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई अवरोध गर्न सक्छ । वाम जनमत तीनतिर विभाजित हुन्छन् । त्यसको असर कम गर्न पनि एमालेले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि दुबै दलका नेता कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गराउने ओलीको तयारी छ । दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमै उनले आगामी फागुनसम्म एमाले प्रवेशको लहर देशभर चल्ने दाबी गरेका थिए ।
उनी पूर्वलडाकूहरु पनि पार्टीमा ल्याउन चाहन्छन् । त्यही कारण सार्वजनिक मञ्चहरुबाट माओवादी नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दा पनि पूर्व लडाकूहरुप्रति सहानुभूति राख्छन् । पार्टीमा पूर्वमाओवादी नेतृत्वलाई उत्साहजनक भूमिका दिएर उनले पूर्व लडाकूहरुलाई पनि एमाले प्रवेश गर्दा असुरक्षित भइन्न भन्ने सन्देश समेत दिन खोजेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।